နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအား ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ ရှင်းလင်း‌ ပြောကြား | Myanmar President Office
ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၁၉
အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသည်။
အဆိုပါ အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲတွင် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Saleumxay Kommasith က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ယင်းအလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲကို ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များအား အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ မိသားစု အသွင်ဖြင့် ရှင်းလင်း ပြောကြားနိုင်ရန် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပိုမို တိုးတက် ခိုင်မာစေရေးအတွက်လည်း ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယနေ့ကျင်းပသည့် အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအား အောက်တိုဘာလဆန်းတွင် ရဲကင်းစခန်းသုံးခုကို ကြိုတင်စီစဉ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှု နောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် လတ်တလောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများကို ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းလျက် နှစ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများသို့ ဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများ အပါအဝင် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှု များကိုလည်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ယင်းသို့ ခက်ခဲသိမ်မွေ့သည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် သွားရန် အစိုးရက လေးနက်စွာ သန္နိဋ္ဌာန်ချထားမှုကို လည်းကောင်း၊ အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်မှုများမှ ရလဒ်ကောင်းများရရှိရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခွင့်နှင့် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုလိုအပ်မှုကို လည်းကောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အာဆီယံ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှု မြှင့်တင်ရန်နှင့် အာဆီယံ မိသားစုဝင်များအကြား ကွဲပြားခြားနားမှုများကို ခင်မင်ရင်းနှီးမှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း အဖြေရှာ ဆောင်ရွက်သွားရန် အရေးကြီးကြောင်းကိုလည်း အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် အစည်းအဝေးကို လက်ခံစီစဉ် ကျင်းပ ခဲ့ခြင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းတို့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေအပေါ် အာဆီယံ မိသားစုနှင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို အာဆီယံက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ဝန်ကြီးများက ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်းများအကြား သဟဇာတရှိစွာဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး၊ အရပ်သား ပြည်သူများ၏ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ အားလုံးအတွက် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုအကူအညီနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးအပ်ရေး နည်းလမ်းများကို အကြံပြု ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အာဆီယံနိုင်ငံများက လူသားချင်းစာနာမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးရန် အသင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့်လည်း လိုအပ်သော လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီများ ဝင်ရောက် ခွင့်ပြုရန်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့ကို အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများသို့ မျှဝေအသိပေးရန် အသင့်ရှိကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကိစ္စရပ်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ နားလည်မှုနှင့် နွေးထွေးစွာ တုံ့ပြန်မှုတို့အပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲသို့ ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Dato Erywan Pehin Yusof၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Kan Pharidh၊ အင်ဒို နီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Ms. Retno Marsudi၊ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Saleumxay Kommasith၊ မလေးရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dato Sri Anifah Aman၊ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Perfecto Rivas Yasay, Jr.၊ စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dr. Vivian Balakrsihnan၊ ထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Don Pramudwinai၊ ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Nguyen Quoc Dzung နှင့် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Le Luong Minh တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။